Ndi 911 bu oru ime? De Telegraaf nwere azịza nye ajụjụ gị niile! : Martin Vrijland
Ndi 911 bu oru ime? De Telegraaf nwere azịza nye ajụjụ gị niile!
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 11 September 2019	• 12 Comments
isi mmalite: theatlantic.com
Ọ bụ nwoke nwere ọmịiko, Wilson Boldewijn, nke ahụ pụtara ìhè na mkparịta ụka mụ na ya nwere ọnwa ole na ole gara aga (lee. ebe a). Anụ ọhịa wolf na uwe atụrụ na-adị ka atụrụ ọzọ mgbe niile, ya mere o yiri ka ọ nweghị ihe iyi egwu. Wilson ebidola ọtụtụ usoro ihe omuma n’ime ya nke kpuchiri echiche nzuzo niile dị na ya bụ nke De Telegraaf na-ekesa. Ọ na-eweta onye nwe ya na mmegide a na-achịkwa, George van Houts, n'ihu igwefoto, ya na Silvan Schoonhoven, "onye nta akụkọ iyi ọha egwu" nke Telegraaf. Ga-ahụ ya etu ahụ. Otu onye ogbu mmadu jiri ya gosiputa ihe bu nkpa nke agwo oria, nke ozo na egosiputa onye ogbu; onye na-egbu anụ nke na-enyocha anụ nke ya.
Echiche nke izu ohi nwere ike inweta nkwado. Kpamkpam ma ọ bụrụ na ị na-atụgharị ha n'ụzọ nke na ha nwere ntinye ị maara tupu oge na ị nwere ike ịkụda ha ma emesịa (bọmbụ ahụ na ala ala abụọ). Echiche nke izu ohi nwere ike itolite na ihe ebum n’uche. Enwere ike ịchọta ihe kpatara nke a na eziokwu na ha jikọtara ya na 'echiche aka nri' ma ọ bụ akara 'right-nku' (Bekee maka 'right'). Ọ bụrụ na ị ga - ejikọ otu ahụ, onye na - eche echiche, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma kwekwa ka ngagharị ahụ nwee ike wee mee ka akụ na ụba daa nke ukwuu, ị ga - akpaso ndị otu ahụ niile na nkatọ niile n'otu daa. .
Lelee akụkọ Telegraaf ebe a ma gụọ n'okpuru.
Anyị hụrụ na-eme na US na Donald Trump na UK ya na ije Brexit. Na Brazil ọ bụ "nri" Jair Bolsonaro ọzọkwa na Europe ndị ọzọ anyị hụrụ ịrị elu site na aka nri, mana mbibi na-achịkwa nke ika ahụ amalitelarị (lee ebe a zuru nkọwa). Ya mere i nwere ike ịmalite ikwenye na izu nzuzo; naanị ma ọ bụ na ụdị ahụ nke otu ike ahụ chebere. Zọ kachasị mma iji jigide mmegide gị bụ ijide onwe gị. Ọ bụ ya mere eji ewepu gị na saịtị dị ka nke a ọ bụ ya mere aha m ji agba ọchịchịrị na mkparịta ụka ọ bụla na mkparịta ụka mgbasa ozi ọ bụla ma kpọọ ndị ọrụ steeti (ndị ọrụ ụlọ na telemarketers n'azụ profaịlụ miri emi), ka ị na-egwu mmiri na nchekwa nchekwa nke ụgbọ elu ndị a na-achịkwa.
N'ezie, anyị nwere ike ikwu na ọ naghịzi mkpa ma ọ bụrụ na eziokwu banyere 911 abatala ìhè. Ọ bụrụ na ikwenyeghi na nkuzi 911 gọọmentị, ị ga-abụrịrị onye isi na otu 'ndị na-eche echiche izu ụka' ma jikọta ya na ika 'nri'. Ọ bụrụ na nsogbu dị ukwuu ma nwee ike itinye ya na akpụkpọ ụkwụ nke ndị isi n'ihu nke ụdị ahụ (ịbụ Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Thierry Baudet na ndị ọzọ), mgbe ahụ, ọha mmadụ ndị ọzọ na-eleda otu ahụ anya ma onye ọ bụla na-aghọ A chụghachiri azụ na mgbasa ozi ndị isi na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ochie. Na ụdị nsogbu a na-abịa, ga-edo ọtụtụ ndị anya ugbu a.
N'ikwu eziokwu, gburugburu 911 ị nwere ike ịkọwapụta na enwere ezi ihe kpatara ị ga-eji tinye mkpokọ, n'agbanyeghị etu ọ dị Silvan Schoonhoven na-eme ike ya niile ịgbanye ya ọtọ. Akụkọ 'etinyere na akụkọ ebubo', ọ dị ka ọ bụ bọmbụ dị na ala ala abụọ nke usoro ọgbaghara 911. Enwekwara ike nyochaa echiche ndị ọzọ. Na nkọwa nke Judy Woods nwere ike ịda ụda kachasị, mana nwanyị a kwa ka a ga - elele ya anya nke ọma maka ọrụ ya ịkwatu nkọwa (eziokwu). Just chọrọ onye dị ka stuttering ara na-achọghị wepu ya na ikwusiri. Mwepụta nke ihe nkiri ‘Loose Change’ (nke Wilson Boldewijn kwuru na fim telivishọn) gosikwara n’ụzọ doro anya otu esi achịkwa mmegide n’ozuzu ya. Ha na-ewulite mmejọ ụma mgbe niile iji nwee ike ịhapụ ịkọcha akụkọ ahụ niile.
Anotherzọ ọzọ iji merie mmegide ahụ bụ na 2009. Amalitere '911' American Movement 'bụ nke onye aha ya bụ Ace Baker duziri ya. Baker bụ onye kachasị na-achọ 911 'onye na-achọ eziokwu' ruo ọtụtụ afọ. A nụrụ ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọzọ na ọtụtụ ihe ngosi redio. Ruo oge Ace Baker rutere n'ihe nkiri Jim Fetzer igbu onwe ya (lee vidiyo dị n'okpuru). Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ otú a ka ọ na-ada ụda n'ihi egbe egbe, mana ọ bụghị mgbe ọ gasịrị ka ọ tụgharịrị ka ọ dị ndụ ma na-agba.
Mgbe ọ bụla echiche na-agba izu na-apụta, dịka ọ dị na nke Judy Woods ma ọ bụ ndị ọzọ, ị ga-eche onye nyere ego nyocha ahụ. Gaghị enwe ike iji nke a na-aba n'akpa uwe gị. Ọzọkwa yana ndị ikom niile dị n'ihu, ndị o doro anya na ha nwere ego na akụrụngwa iji kwado ọrụ ha, anyị maara ugbu a na ọtụtụ na-arụ ọrụ na nzuzo maka onye ogbu anụ. A na-ahapụ ndị ọzọ nọ n'ihu mgbasa ozi ọzọ (nke a makwaara dị ka '' eziokwu na-agagharị ') ka ha see ụlọ ndị mmadụ juru afọ maka afọ ga-ejikọta na mberede, dịka ọmụmaatụ, pedophilia.
Ezigbo ihe omuma banyere nka bu Zen Gardner, onye nke 2 putara na mberede otutu mgbe gara aga dika onye ndu nke Mo Nso n’agha n’okpukpu nke umuaka nke Chineke. Ọ nọghị naanị n'ime obere oge (dịka ọmụmaatụ, otu afọ). Ee e, ọ bụ onye bụ onye 27 kemgbe ọtụtụ afọ. A maara cultm known nke Chineke nke nkwalite ugwu na practm with ya na umuaka tinyere nkuzi ha. Nke ahụ bụ ntakịrị ihe. Agbanyeghị, ndị mmadụ dị ka Willem Felderhof na Ole Dammegard, ndị jupụtara ụlọ nzukọ ndị ahụ, dịka ọmụmaatụ, ọgbakọ ndị mepere emepe Open Mind, na-eji aka na eze na-agbachitere nwoke ahụ (lee. ebe a en ebe a). Anyị na-ebi n’oge mgbe eziokwu siri ike ịchọpụta maka ndị nkịtị, ọ bụrụ na naanị maka teknụzụ niile dị n'ahịa (lee ebe a). Ikekwe nsogbu kachasị bụ eziokwu ahụ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmegide ọ bụla na-esite n'aka onye ogbu anụ. Onye ọ bụla nke nwere nghọta ịkọ ugbo nwere ike iche na 911 bụ ọrụ n'ime.
Gụọ na isiokwu a otu a ga - esi eso na ndị enweghị akara, maka na ọ dị mkpa ka ị mụta ịkọwapụta iche.
Mkparịta ụka ekwentị na Wilson Boldewijn sitere na De Telegraaf: usoro gbasara nkwekọrịta ịgba izu
Kọmitii nyocha nke 911 malitere ikpe megide ọchịchị US
George van Houts, na anụ ugbo na clog gold dị ka eriri nchekwa netiwu (nnukwu efere 911)
N'ajụjụ ọnụ Martin Vrijland na Telegraaf.nl na Wilson Boldewijn (video)
Ndị na-aghọ aghụghọ, DWDD, Kajsa Ollongren na mgbasa ozi nkwalite maka AIVD na 'eziokwu check'
Tags: 911, Mmiri na-egbuke egbuke, izu nkata, nkwekọrịta nkwekọrịta, nkwekọrịta aghụghọ, achịkwa, George, Osisi, n'ime ọrụ, ika, mmegide, nku aka nri, Silvan Schoonhoven, telegraph, van, Wilson
2 igwefoto dere, sị:
11 September 2019 na 21: 12
O nweghịdị uru ọ bara etu o siri mee.
Ọ bụrụ n’ịgụọ njikọ ndị na-acha anụnụ anụnụ na ederede dị n’elu, a ga-atụgharị gị gaa.
Nsogbu, Mmeghachi, Ngwọta… ..
Ugbo ole ka esiworo n’olu ndi mmadu n’otu n’acho 9 / 11. Ole ndị ga-erite uru na ya? Nke ahụ ọ̀ bara uru ugbu a?
Batrị site gbakwunye na mwepu ọ na-agbapụta nke ọma.
Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na ụmụ amaala nkịtị (enweghị CIA ma ọ bụ AIVD) nwere ike na-ele awa 24, ha kwesịkwara ịbụ ndị ziri ezi.
A na-enyocha ndị ọrụ nke ọrụ nchekwa ndị ahụ, n'ihi na ị maghị.
Emere ka ihe nile di ndu rue ihe nile ha kwuru.
Ndị ọrụ nchekwa enweghị ike ịsọ mmiri n'ihi na ha na-enyocha onwe ha maka mmiri.
Naanị lelee ụlọ ọrụ dị na Basisweg, Boldewijn agaghị arahụ… (agbanyeghị AT5 (A naghị ekwe ndị ụlọ akwụkwọ nke AIVD)), Big Nwanna 😉 kpọmkwem maka ndị na-agbapụta!
11 September 2019 na 23: 03
Telegraaf dị ka isi iyi maka ụdị ọgbaghara a, nke ọma ekwesịghị iju anyị anya na nke ahụ .. ekwuputaghị aha Danny Jowenko na nyocha nke Fox n'onwe ya gosiri na n’otu oge ọrụ a enwere ọtụtụ ndị Israel gbara arụ na radar nke FBI .. N’ezie, ọ dịghịzi ekwu okwu mbibi Bijlmer, otu ndị egwuregwu?
mmanya ahụ na-adịghị mma, akwụkwọ ga-agafe maka 'ndị odeakụkọ', ihe ọmụma ahụ doro anya ma dị mfe ..
12 September 2019 na 15: 56
waya ahụ sitere na nkịta ọhịa ka dị mkpa, mana anyị ekwesịghị ịdị na-eche na nke ahụ ogologo oge ... dị ka onye ahọpụtara hota
11 September 2019 na 23: 13
Alan Sabrosky kwuru na N'ajụjụ ọnụ redio na 2010, na mgbagha obi ya banyere akụkọ 9-11 sitere n'aka Danny Jowenko gbara aka. Sabrosky kwughachiri nke a na N'ajụjụ ọnụ 13th 2011.
Ebe saịtị Danny Jowenko nwụrụ
Ọ nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala n'okporo ụzọ kwụ ọtọ na obodo Serooskerke, Netherlands, na 16th July 2011.
Akuko Abreu kwuputara isi okwu na March 02, 2016 9 / 11 Whistleblower gburu na Dutch Sous site na US ọgụgụ isi.
15 September 2019 na 14: 24
ihe omuma ne jiri sayensi kwado ya, ma i naghi ege nti ahu.
Oghere ọdụm Siza dere, sị:
12 September 2019 na 08: 44
M ka bụ otu n’ime ndị meruru echere na ha nwere ike iche maka onwe ha. Ugbu a, m na-agbalị mgbe ọ bụla ị ga - eche echiche ma a bịa n'ihe ndị ọzọ, ịchọta eziokwu. Ugbu a, m na - aga ichefu uche m mgbe niile ma kpọọ oku nke eziokwu ... Mgbe ahụ ị ga - achọpụta n'oge na - adịghị anya na enweghị eziokwu ma ọlị. Mana gaa kọwaa nke ahụ na ahịrịokwu ole na ole na gịnị ka ọ dị mkpa?! Naanị ihe dị mkpa bụ na ndị ugha nke Ekwensu maara na otu nnukwu ìgwè mmadụ NA-EGO!
Marcos dere, sị:
12 September 2019 na 20: 11
Enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti "eziokwu" na "eziokwu". Ọdịiche a nwere ọtụtụ ụdị n'obodo anyị. Echere m na ịgba ịnyịnya ígwè bụ ihe kacha mara maka ọtụtụ ndị mmadụ, mana anyị na-anakwere ma na-agbaso ya. Maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ngosi mara mma iji hụ ókè ha nwere ike ịga agha ụgha ha.
13 September 2019 na 15: 25
Have nwere ọtụtụ ndị mmadụ na ọtụtụ ndị mmadụ?! Abụ m otu n’ime ndị mmadụ na-anaghị aghọta ọnọdụ gị!
13 September 2019 na 15: 33
Lelee anya ugbu a ...
13 September 2019 na 23: 57
Mgbasa ozi na 28 June 2001….
14 September 2019 na 12: 15
ZIO ọ dị nnukwu elu na ya, mana ọtụtụ na-ahapụ ya ka ọ mee na-enweghị iburu ibu ọrụ ma rapagidesie ike na mgbasa ozi ọfụma.
ndị a na-enyo enyo na mbụ enwetachaghị, ha na-aga n'ihu na-akpụgharị ruo mgbe ha nwetara ọkpọ ... wee wee nọrọ tinye
16 September 2019 na 17: 01
mee ka m kwuo naanị na ọ jighi njọ na usoro ọgụgụ isi ahụ, mgbe ahụ m na-ekwu site n'ahụmahụ nke onwe. Ọtụtụ ndị achọghị naanị ya na-enweghị nkọlọ na-ewere ọnọdụ, mmemme site na ndagide ruo ili gbanyere mkpọrọgwụ mkpọrọgwụ ike
" Kedu mgbe US ga-akwụ ụtụ ihu igwe maka bọmbụ ndị ahụ ha tụbara?
Kpọ oku ngwa ngwa! Anyị ga-ewepụla usoro mgbasa ozi n'ọrụ ugbu a! »
Nleta nile: 16.104.966
Canada: Dr. China Dr. Xiangguo Qiu na agha nje virus nke Wuhan iji mee ka China dabere na China maka mmezi
Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1
Onye ntorobịa nke oge a chọrọ imejupụta agụmakwụkwọ maka agụmakwụkwọ (gulags) na ihu igwe
Coronavirus sitere na China na-enye alibi zuru oke maka ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi zuru ụwa ọnụ
Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu
Mmiri op Canada: Dr. China Dr. Xiangguo Qiu na agha nje virus nke Wuhan iji mee ka China dabere na China maka mmezi
Wilfred Bakker op Canada: Dr. China Dr. Xiangguo Qiu na agha nje virus nke Wuhan iji mee ka China dabere na China maka mmezi
Marcos op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1
Martin Vrijland op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1